NgoLwesihlanu, Februwari 12, 2021 NgoLwesihlanu, Februwari 12, 2021 Douglas Karr
Intswela-ngqesho yehla yaya kwiipesenti eziyi-8.4 ngo-Agasti, njengoko iMelika ibuya kancinci kubhubhane. Kodwa abasebenzi, ngokukodwa ukuthengisa kunye neengcali zentengiso, babuyela kwindawo eyahlukileyo kakhulu. Kwaye ayifani nantoni na esakha sayibona ngaphambili. Ukujoyina kwam i-Salesforce kwi-2009, sasikwizithende zoRhwebo olukhulu. Ingqondo yethu njengabathengisi yaphenjelelwa ngokuthe ngqo kukuqiniswa kwebhanti yezoqoqosho eyayisandula ukwenzeka kwihlabathi liphela. La yayingamaxesha angenamsebenzi. Kodwa
Ukuba bekukho ishishini elinye apho itoni yedatha ibibanjwa ngokuqhubekayo, ikumzi mveliso weMpahla yeMpahla yabaThengi (CPG). Iinkampani ze-CPG ziyazi ukuba idatha eNkulu ibalulekile, kodwa kusafuneka bayamkele emsebenzini wabo wemihla ngemihla. Zintoni izinto eziPhakhejiweyo zabaThengi? Izinto ezipakishwe ngabathengi (i-CPG) zizinto ezisetyenziswa mihla le ngabathengi abaqhelekileyo abafuna ukutshintshwa okanye ukuzaliswa okuqhelekileyo, njengokutya, iziselo, iimpahla, icuba, izithambiso kunye nendlu.